Xa Kusehla Iintlekele
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
INTLEKELE yehla nakubani na nanini na, yehla nakwabo babonakala bengaswele nto.
“Ukukhawuleza asikokwababalekayo, idabi asilolabanamandla, nokutya asikokwezilumko, nobutyebi asibobabanokuqonda, kwanobabalo asilolwabanokwazi; ngenxa yokuba bonke behlelwa lixesha nasisihlo esingenakubonwa kwangaphambili.”—INtshumayeli 9:11.
Ngoko ke umbuzo awukho sekubeni uza kwehlelwa yintlekele kodwa usekubeni uza kwenza ntoni xa isehla. Ngokomzekelo:
Ungathini xa unokonakelelwa zizo zonke izinto onazo kwintlekele yemvelo?
Ungathini xa kunokufunyaniswa ukuba unesifo esibuhlungu esinganyangekiyo?
Kuthekani ukuba ufelwe ngumntu omthandayo?
AmaNgqina kaYehova, abapapashi bale magazini, bakholelwa ekubeni iBhayibhile ayinakukunceda ekunyamezeleni ezi ntlungu nje kuphela kodwa ingakunceda nasekubeni ube nethemba eliqinileyo. (Roma 15:4) Khawufunde kula mava mathathu alandelayo.